PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - Ugqugquzele abanye usomabhizinisi
Ugqugquzele abanye usomabhizinisi
Isolezwe - 2017-10-12 - EZOMNOTHO - BONISWA MOHALE
UGQUGQUZELE osomabhizinisi ukuthi bangene kwezobuchwepheshe besimanje uNksz Eleni Kwinana oyiNhloko yophiko olubhekelele amabhizinisi kwaVodacom KwaZulu-Natal.
UNksz Kwinana uthe osomabhizinisi kufanele bagxile ebuchwephesheni besimanje ukuze banyuse inzuzo engena emabhizinisi abo.
Uveze ukuthi unesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-10 esebenzela izinkampani zezobuchwepheshe besimanje kwazise waqala kwaVodacom eminyakeni eyisithupha edlule ephethe uphiko lwamafranchise.
Uthe emuva kokusebenza iminyaka eyisithupha kwaVodacom washiya waya enkampanini yezobuchwepheshe iDimension Data Advanced Infrastructure lapho ayebhekelele ezokukhangisa waphinde wabuyela kwaVodacom ngoJulayi walo nyaka njengoba eseyi-Executive Head for Enterprise KwaZulu-Natal.
Isikhundla sakhe esisha simnikeza ithuba lokuqinisekisa ukuthi amabhizinisi kahulumeni nawomphakathi angena kwezobuchwepheshe besimanje. “Ngisebenzisana nezinkampani ezinkulu nosomabhizinisi abancane ngibasize ngamasu azokhulisa izinkampani zabo uma besebenzisa ubuchwepheshe. Ngikholwa wukuthi ikusasa le-Afrika lincike kwi-4th Industrial Revolution okuwukuhlela intuthuko encike kwezobuchwepheshe.”
Uthe amakhasimende akwaVodacom azohlomula ngentengo yemikhiqizo yabo eyehlukene engambi eqolo njengoba benza isiqinisekiso sokuthi i-data yehliswe ngo44% benza nokuthi ukungena ezinkundleni zokuxhumana kube mahhala.
Osomabhizinisi abancane uveze ukuthi bayaqeqeshwa ngokusebenzisa ubuchwepheshe ukuthi buthuthukise amabhizinisi abo kanti abanye baphinde bathole ithuba lokudayisa imikhiqizo yakwaVodacom.
“Uma kukhona umsebenzi esiwudingayo siwunikeza izinkampani ezincane ngoba sifuna osomabhizinisi abancane bathuthuke ukuze bakwazi ukukhula,” kusho uNksz Kwinana. UNksz Kwinana unezingane ezimbili indodakazi eneminyaka engu-10 nendodana eneminyaka eyisishiyagalolunye, useke wasebenzela iSpar Group, CNA, Clicks Group,nePure Pharmacy.
“Ngikholwa wukuthi ubuchwepheshe buyakwazi ukuxazulula izinkinga esibhekene nazo siwumphakathi. Ngiyakholelwa ekuthuthukiseni amakhono abantu ukuze sikwazi ukwakha impilo engcono ezweni. Ngineziqu ze-Psychology engizisebenzisayo ukuqinisekisa ukuthi abantu banamakhono adingekayo,” kusho uNksz Kwinana.
Uthe uzinikeza isikhathi sokuba nomndeni wakhe ngokudlala imidlalo ehlukene njengoba indodana yakhe ithanda ezemidlalo kanti indodakazi ithanda umculo.
Uphethe ngokuthi uzokwenza isiqiniseko sokuthi abantu banobuchwepheshe besimanje emakhaya, ezikhungweni zikahulumeni kanjalo namabhizinisi asebenzisa ubuchwepheshe.
UNKSZ Eleni Kwinana uthi amabhizinisi kufanele asebenzise ubuchwepheshe besimanje ukuze adale amathuba omsebenzi